Aqoonsiyada Maxalliga ah ee Imaatinka Imaatinka looga Baahan Yahay Adeegyada Sharciga | Shirkadaha Sharciga ee Dubai
Xirfadlayaasha Qareenada UAE ee Deegaanka ee Loo Baahan Yahay Adeegyada Sharciga
U doodayaasha Maxalliga ah
Waxay noqon kartaa wax xad dhaaf ah inaad isku daydo inaad raadiso qareen maxali ah oo caan ah oo khibrad leh oo kaa caawin kara inaad xalliso qaar ka mid ah saadaasha ugu adag iyo jahwareerka ah ee aad noloshaada kala kulanto.
heerka wanaagsan ee daacadnimada
aamin oo waad ku kalsoonaan kartaa
Xaruntaada Sharciga ee Imaaraatka
Waxaad tahay midka ugu nugul markii aad u baahatid la-talin sharci. Sidaad ula halgameyn laheyd dhibaatada noocaas ah, yaad aamineysaa oo aad isku halleysaa? Taasi waxay noqon doontaa qareenkaaga, dabcan.
Si aad u sahlanaato rabitaankaaga, waa kuwan sifooyinka ugu sareeya ee loo raadsado qareen:
Daacadnimo iyo Daacadnimo
In ka badan waxkastoo kale, waxaad dooneysaa in qareenkaaga inuu kugu noqdo mid toos ah oo daacad kuu ah wax ku saabsan suurta galnimada iyo wax aan macquul aheyn. Inta lagu jiro waqtiga adag ee noloshaada, waxa ugu dambeeya ee aad rabto waa rajo been ah. Si kasta oo ay tahay xaaladdaada sharciyeed, waxay qareenkaagu u joogi karaa inuu ku siiyo taageero daacad ah.
Sidoo kale, qareenkaaga sidoo kale waa inuu heystaa heer sare oo daacadnimo. Maaddaama ay iyagu yihiin kuwa adiga wakiil kaaga noqda maxkamadda sharciga, waa inay ku dhaqmaan dareen weyn oo daacadnimo haddii ay doonayaan dadka kale ee ku dhaqma sharciga inay ixtiraamaan.
Danahaaga ugu fiican waa inay had iyo jeer ahaadaan mudnaanta koowaad ee Garyaqaanada UAE ee Maxalliga ah. Waa inay xaaladaada u maareeyaan si taxaddar leh intii suurtogal ah bilow ilaa dhamaad.
Khibrad Sharciyeed Dheeraad ah ee Sharciga UAE
Garyaqaan wanaagsan sidoo kale waa qof khibrad ballaaran u leh arrimaha sharciga. Waa inay ugu adeegaan macaamiisha ka soo jeeda dhammaan qaybaha kala duwan ee nolosha iyagoo leh nooc kasta oo daneynaya sharciga. Raadi qareen leh khibrad kugu filan xaaladaada gaarka ah ama dhibaatadaada. Tusaale ahaan, haddii aad caawimaad uga baahatid furitaankaaga, raadso qareen leh khibrad ku filan tan.
Khibraddu aad ayey muhiim u tahay maadaama tani siineyso qareenkaaga kalsoonida ay u baahan yihiin si aad u gaarto yoolkaaga.
Aqoon ku filan oo ku saabsan Shareecada iyo Sharciga UAE ee Deegaanka
Mawduuc kasta oo noqon kara mid adag oo hodan ah sida sharciga oo arimahan had iyo jeer waa ay isbadalayaan oo ay kobcayaan maalinta. Qareenkaaga wuxuu ku qaadan lahaa sanado barashada si loo gaaro fahamka iyo aqoonta sharciga iyo dhaqanka UAE ee ay hadda leeyihiin. Waa inay sidoo kale xajistaan ​​oo kobciyaan aqoontaan iyagoo la socodsiinaya isbadalada isla markaana qaadanaya tababarka loo baahan yahay.
Waxaa jira qareeno aqoon gaar ah u leh ama shahaadooyin dheeri ah oo quseeya xaaladaada gaarka ah. Hubso inaad hubiso takhasuskooda iyo aqoontooda. Qareenada badankood waxay macluumaadkan la wadaagaan dadweynaha iyagoo la wadaagaya taariikh nololeedkooda waxbarasho.
Xirfadaha Isgaarsiinta heer sare ah oo Carabi iyo Ingiriis ah
Qareenada UAE ee ugu fiican waa qof leh qaab uu wax u yiraahdo waxyaabo si cad oo fudud oo fahmi karo. Waa inay ogaadaan goorta loo fududaynayo dhalo-qabeyaasha sharciga ah ee adag wax aad fahmi karto. Sidoo kale waa inay noqdaan kuwa caqli gal ah, caqli badan, oo fiiqan sida ay u maareeyaan dacwadaada garsoorayaasha iyo qareenada kale hortooda.
Waa waajib in qareennada ay fahmaan dhagaystayaasha. Waxaad ku kalsoonaan doontaa oo keliya qareenkaaga marka aad fahanto waxkastoo uu sheegayo. Markaad dareento jahwareer iyo xaalad ku lumiso, waxaad waayi doontaa oo keliya kalsoonida qareenkaaga.
Haddii aad waligaa isku aragtid inaad ku dhegan tahay arrimo qaanuun, waxaad hubisaa inaad raadiso sifooyinkaas si aad kalsooni ugu qabtid inaad ogtahay inaad qareen sax ah tahay dhinacaaga.
Waxaan si adag u difaacnaa macaamiisha caalamiga ah ee dhibaataysan
Way fududahay macaamiisha Caalamiga ah, kuwaas oo doonaya inay caddeeyaan arrimaha sharciga ee Dubai ama UAE